Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Haweenka Ogadeniya oo si Caalami ah loogu qabtay Melbourne
Maalinta Haweenka Ogadeniya oo si Caalami ah loogu qabtay Melbourne
Ururka OYSU ee Melbourne si caalami ah u soo bandhigeyn xuskii Maalintii haweenka Ogadenia.
Xaflad aad u heersareysa oo loogumagac daray Xuska Maalinta Haweenka Ogadeniya ayaa lagu qabtay Magaalada Melbourne ee wadanka Australiya. Xafladan ayaa waxa kasoo qeyb galay marti sharaf kasocota Jamacada Melbourne University iyo crisis hub, Ururka dumarka Ogadenia, dumarka Soomaaliweeyn, Sidoo kale Hablaha OYSU Melbourne.
Xafladan oo ay soo aggaasimeen ururka dhalinta iyo Ardeyda Ogadeniya ee OYSU Melbourn ayaa qabsoomay maalinimadi 17 March 2012. Waxuuna khaas u ahaa kaliya Haweenka.
Luul Cabdi Mocalim oo ah Gudoomiyaha Ururka OYSU Melbourne ayaa noo sharaxday u jeedada ay maanta u qabteen xafladan lagu muujinayo kaalinta Haweenka Somalida Ogadeniya. Taariikh ahaan haweenka Aduunku waxa ay leeyihiin maalin ay xusaan taariikhda haweenka dhibaatoyinki soo maray, caqabadaha hortaagan waana kulan ay qadiyada haweenka lagusoo bandhigo. Sidaas awgeed haweenka Ogadeniya oo dhibaatoyin gumeysi ku hoos jira waxa baahi badan loo qaba in codkooda banaanka loo soo saaro oo la helo maalmo badan oo Qadiyada haweenka Ogadeniya lagu muujiyo. Waxaana ururka Dhalinta OYSU uu gartay in aan sameyno maalin si maalinkaas gooni loogu yeelo haweenka Ogadeniya, si bulshadeena aan ugu baraarujino dhibaatoyinka Haweenka ku yimada ee gumeysiga inaga soo gaadha iyo dabcan horumarka iyo kaalinta ay haweenku ku leeyihiin bulshada intab.
Kulankan oo ay kasoo qeyb galeen ajaanib badan oo xiisaynaya qadiyada haweenka Ogadeniya ayaa waxa kulan si muuqata uga qeyb qaatay kana hadashay
Emma oo kasocotay Jaamacada Melbourne iyo Crisis Hub oo ah hayad haayad aan dowli aheyn. Emma waxay kahadshey wadashaqeeynta eey laleedahay Jaaliyada Ogadenia ee Vcitoria, Ururka Dumarka Victoria iyo OYSU Melbourne. waxa Emma ay u muujisay haweenka Somalida Ogadeniya garab istaag.
Shirkan oo gabdho badan oo dayar oo u dhashay Somalida Ogadeniya aqoon yahano iyo xirfado badan oo ah kuwo lagu shaqeysto ay kasoo qeyb galeen ayaa waxa aad loogu farxo aheyd nidaamka ay gabdhaha Somalida Ogadeniya ay usoo qaban qaabiyeen Xafladan, iyo muuqalada ay soo dhigeen.
Muna Ahmed Nasir oo aheyd gabadh aqoon yahan ah kana tirsan Ururka OYSU ayaa sharaxaad dheer ka bixisay u jeedoyinka ururka OYSU loo asaasay iyada oo soo bandhigtay daraasad dheer oo ku aadan dhalinta Somalida Ogadeniya iyo Howlaha Ururka OYSU. Waxayna ka codsatay in gabdhaha Somalida Ogadeniya ay ku biiraan ururada bulshada Ogadeniya sida OYSU si ay fikirkooda iyo xoogoogaba ay halganka ugu hibbeeyaan. Ururka OYSU ayaa gabdhuhu ay kaalin xoog leh ku leeyihiin oo lamid ah kan wiilasha haddeysan ka horeyn.
Waxaa kale oo Maalinkan si qotto dheer loogu soo bandhigay Melbourn dhibaatoyinka haweenka soo gaadha, iyo Kaalinta haweenku ay ku leeyihiin halganka Somalida Ogadeniya. Barnamijkan oo ay soo diyaarisay Ayan Ibrahim oo kamid ah OYSU Melbourne,
Ayaan waxay tusaale usoo qaadatay Haweenka Somalida Ogadeniya ee la odhan karo waxay u yihiin bulshada dad tusaale ah (Role Model) Sida halgamaada weyn ee caanka ka ah Geeska Afrika Rooda Afjano oo iyadu halganka kaalin aad u xoog badan kaga jirta.
Sida ragga Somalida Ogadeniya ay Gabayga ugu gudbistaan dareenkooda, Haweenka Somalida Ogadeniyana waxa ay leeyihiin haween xikmadooda ku gudbiya Gabayo, waxaana shirkan iyada oo lagu qiimeynayo kaalinta haweenka Waxaa kal oo ay kulankan kusoo bandhiggeen Gabayo iyo taariikhda haweenka Ogadeniya waxaana dhowr gabay oo aad loogu boggay oo xanbaarsan qiimo weyn halkaas kasoo jeedisay Raaxo sheikh oo ka mid ah dumarka Ogadenia ee Victoria.
Haweenka Somalida Ogadeniya waxa kale oo ay aqqon badan u leeyihiin cilmiga Diinta waxayna kulankan iyaga oo ka faa ideysanaya is xasuusinta Eebe ay Hani Cabdulahi Macalim oo ka mid ah ururka OYSU Melbourne ay soo jeedisay maxaadaro Diini ah oo kusaabsan dumarka iyo kaalinta eey ooga qayb qaadankaraan Halganka xoriyada lagu raadinayo.
Fartuun daahir oo ku magac dheer( Fartun JWXO) oo ka mid ah ururka haweenka Ogadenia ee Melbourne, Victoria. halkaas ka qaaday buraanbur oo dadkii meesha joogay aad u qiiro galiyey. Buraanburkaas oo erayadiisa ka mid ahaayeen
“Halganka hooyiyo waxaa wada hablo. Halyeeyga halgamahayaana way hawadinhayaan. Wax ayna hayin waligiiba muu hirgalin . Gumaysiga Haliilay hanjabinyaan. xornimo Loo heelanyahay habaynayaan.Fariin halgan baan wadanaayoo faafinaa. Fadhiga manaqaano faras baanu fushanahey. Fidnada dabaqoodhigaan ka fogaanaynaa. Faduusha Gumaysigaanu fashilinaa”.
Intaas kadib waxaa lo sobandhigay dhaantooyin kala duwan oo run ahaandii aad iyo aad uga heleen dumarkii goobtaas joogay.
Luul Gudomiyaha Ururka dhalinta OYSU melbourne ayaa iyada oo ku hadlaysa magaca guud ee dhalinta iyo gabdhaha Somalida Ogadeniya waxay ugu baaqaysa bulshaweynta Somalida Ogadeniya inay fiiro gaar ah u yeeshaan haweenka Ogadeniya, oo ay la socdaan kuwooda ku jira xabsiyada gumeysiga ama dhibaatooyinka badan ay soo gaadheen.
Waxa ay tacsi u diraysaa Gabdhaha somalida Ogadeniya ee lagu faro xumeyo dhulkooda hooyo isaga oo gumeysigu tacadiyo iyo dilal u geysanayo, 16 gabdhood ee laba todobaad ka hor dhowaan lagu faro xumeeyay gudaha Ogadeniya ayaa tusaale ugu filan dhamaanteen. Sidaas awgeed ayay tiri waa in shacabka Ogadeniya meel kasta oo aynu joogno u midownaa sidii gabdhahena aynu u bad baadin laheyn ugana xoreyn laheyn Gumeysiga madow ee liita.
Alla Mahadleh – Guul iyo Goobanimo